Wednesday April 26, 2017 - 21:36:46 in Wararka Gudaha by
Kulankan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda dhalinyadara waxaa kasooa qeyb galay Masuuliyiinta Wasaaradda oo hor kacayo Wasiirka ku xigeenka , Guddiga Olombikada Soomaaliyeed iyo Xiriiradiisa, waxaa ujeedada kulanka sidii ay labada qeyb isaga kaashan lahaayeen Horumarinta.
Masuuliinta GOS oo ugu horeyn kulanka ka hadlay waxayna si qoto dheer uga warbixiyeen xaaladda Isboortiga dalka 26 sano ee lasoo dhaafay in qaabka ay ku shaqeynayeen iyo Wasaaradihii ka horeeyay Wasaaraddan oo si wanaagsan ula shaqeeyay basle aysan ku guuleysan in miisaaniyada dhaqaalaha Wasaaradda lagu daro horumarinta Isboortiga.
Waxayna Dhanka ka dalbadeen in ay xooga saarto sidii ay dowladda miisaaniyada SPortiga u meel lahayd taasoo qeyb ka qaadan karta dadaalka loogu jiro horumarinta Isboortiga dalka, waxayna Wasaarada uga mahad celinayeen qaban qaabadda kulanka.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo Isboortiga Axmed Cumar Islow oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaar u tahay in ay qaado tilaabokasta oo sare loogu qaadayo Ciyaaraha dalka, waxuuna intaa ku daray in iska kaashan doonaan dadaalkasta.
Wasiirka ayaa dhanka kale tilmaamay arinta miisaaniyadda ay tahay arin jirta oo aan talaabo horey looqaadi karin haddii aan la lahayn basle aysan ka jiifan doonin sidii lagu gaari lahaa.
Waa kulanki ugu horeeyay oo ay Masuuliyiinta Wasaaradda ee xilka la wareegay horaanta Bishan April ay kulan la qaataan Guddiga olombikada waxayna laba qeyb isku raaceen in kulamada la joogteeyo lagana wada shaqeeyo horumarinta Isboortiga.